INingizimu Afrika ikhungethwe yifu elimnyama | Scrolla Izindaba
INingizimu Afrika ikhungethwe yifu elimnyama
INingizimu Afrika iphetha ngokuvala isahluko sayo somlando ngokushona kowokugcina kwabayi-11 ababemangalelwe ecaleni lokuvukela umbuso.
UAndrew Mlangeni wama eduze kukaNelson Mandela, uGovan Mbeki, uWalter Sisulu kanye noAhmed Kathrada uma sibala abancane ababekhona ecalani lokuvukela umbuso ngonyaka wezi-1963-64.
UMlangeni washona ngobusuku bomhla zingama-21 kuNtulikazi e-1 Military Hospital, ePitoli – ngemuva kokugubha usuku lwakhe lokuzalwa ebungaza iminyaka engama-95 mhla ziyisithupha kuNtulikazi.
Owokugcina owasala owayemangalelwe kanye naye ecaleni lokulwela ezombusazwe, uDenis Goldberg, washona mhla zingama-29 kuMbasa kowezi-2020 eKapa.
UMlangeni wachitha ingxenye engaphezulu kwekota yempilo yakhe e-Robben Island, ngemuva kokugwetshwa impilo yakhe yonke ejele nguhulumeni wobandlululo kowezi-1964.